Home Wararka Maanta Xog: Musharaxiinta qaar oo billaabay lacag bixinta iyo Qatar oo la sheegay...
Xog: Musharaxiinta qaar oo billaabay lacag bixinta iyo Qatar oo la sheegay inay musharax cusub taageereyso
Muqdisho (Allbanaadir Media) – Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegaya inay si teel teel ah u billaabatay bixinta lacagaha musharaxiinta ay siinayaan xildhibaanada.
Xogta aan helnay ayaa sheegeysa in xarunta ololaha musharax madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ay noqotay halkii ugu horeysay ee lacag laga bixiyey, inkasta oo weli aysan caddeyn cadadda la bixinayo.
Waxaa sidoo kale jira musharaxiin kale oo dhowr ah oo bixiyey lacago kooban.
Dhinaca kale, Villa Somalia ayaa la sheegay inay keentay xujo cusub oo yaab leh, ayada oo xildhibaanada u sheegeysa inay lacagtooda qaataan kadibna seexdaan Villa Somalia, oo subaxii lagu qaadayo basas, si looga hor-istaago inay aadaan xarumaha kale ee musharaxiinta, oo aanay lacag uga qaadan.
Xubno ku dhow musharaxiinta qaar ayaa Allbanaadir Media u sheegay inay rajeynayaan in ugu yaraan ay bixiyaan 50% lacag kasta oo ay bixiso Villa Somalia, ayaga oo ku doodaya in taasi ay laba mar lacag siin karto xildhibaanada, kadibna qofka ay doonaan ay u codeyn doonaan, ayaga oo ku rajo weyn in qofkaas aanu noqon doonin Farmaajo.
Allbanaadir Media si madax banana uma xaqiijin karto xogta Sahan Resaerch.
Wixii kusoo kordha kala soco Allbanaadir Media, Insha Allah.